Nyeredzi yechiitiko cheApple: iyo Mac Studio uye iyo Studio Display | ndinobva mac
Nyeredzi yechiitiko cheApple: iyo Mac Studio uye iyo Studio Display
Runyerekupe rwakanga rwabuda pamusoro pea Yakanyanya simba Mac mini. saka vazhinji vedu takafunga kuti yanga isati yanyatsogadzirira, uye kuti yaizounzwa paWWDC June anotevera.
Zvakanaka, Apple yatishamisa isu tese, uye isu tatova nepano nyowani uye nyowani nyowani Vadivelu Comedy MacStudio nechidzitiro chayo chinoenderana Vadivelu Comedy StudioDisplay. A "kwete kudaro mini" Mac ine yakanyanya kushanda. Ngationei izvo avo vekuCupertino vakaisa mukati meiyi aluminium bhokisi….
Apple ichangobva kuratidza pachiitiko chayo chekutanga cha2022 Mac mini itsva ine maficha anopfuura Mac Pro.Saka hatichakwanise kuidaidza kuti "mini". Inowanikwa neiyo itsva processor M1 Ultra yataurwawo masikati ano.
1 Vadivelu Comedy MacStudio
2 Vadivelu Comedy StudioDisplay
Vadivelu Comedy MacStudio
Iyi komputa yepamusoro inotora mukana wekuti "idiki" iyo M1 processors kupisa uye yakakwanisa kukwana mu diki aluminium kesi, yesimba re processor yainayo.
Izvi zvinokonzerwa nekuti iyo kesi yakagadzirirwa kuita yakaverengerwa manejimendi yekupisa kunogadzirwa neM1. Pachigadziko, kufamba kwemhepo inokwira pamusoro pesimba rinotenderera rinoitwa. Kusunungurwa kwekupisa kunoitwa nekubuda kwemashure kuburikidza 2.000 zvinokanganisa mechanized.
Idiki kunze, yakakura mukati.
Muchikamu connectivityIine ina USB-C Thunderbolt 4 ports, Ethernet port ine tsigiro yegumi GB network, maviri USB-A ports, HDMI port, uye audio jack. Iyo ine zvakare Wi-Fi 10 uye Bluetooth 6 yakavakirwa mubhodhi.
Iyo mhando ine mhando mbiri dzakasiyana, ine maviri akasiyana processor zvakare: chipset M1Max o M1 Ultra. Simba rakasiyana uye mutengo wakasiyana, zviri pachena.
Bhokisi reMac Studio rine maviri USB-C madoko kumberi (muM1 Ultra modhi ivo Thunderbolt 4) uye SD kadhi muverengi. Inogadziriswa iine 64 GB ye RAM mumodhi ine M1 Max chip, uye 128 GB mumuenzaniso neM1 Ultra.
El kuchengetedza yemhuka yakataurwa iSSD inopa 7.4 GB / s yekumhanya, inowanikwa kusvika ku8 TB yekugona.
Mutengo weiyo Mac Studio nyowani inotanga kubva ku 2.329 Euros neM1 Max chip uye iyo 4.629 Euros kana tikasarudza iyo itsva M1 Ultra. Pamitengo iyi zvingave zvakafanira kuwedzera ndangariro nekuwedzera kwekuchengetedza kana isu tichida kuwedzera iyo yekutanga modhi. Iwe unogona kutochengeta, nekutakura kubva munaKurume 18.
Vadivelu Comedy StudioDisplay
Uye nekuvhurwa kweiyo Mac Studio nyowani, Apple yakaunzawo "matching" skrini: iyo Vadivelu Comedy StudioDisplay. Iyo yekutarisa ine dhizaini yakafanana neiyo 24 ″ iMac, ine yakaderedzwa margin pane yayo yese perimeter.
Magadzirirwo ayo ekunze akagadzirwa zvachose nealuminium, uye inokwanisa kurereka kusvika kumadhigirii makumi matatu. Iyo skrini ndeye 30-inch TrueTone inoenderana ne27 miriyoni pixels, mazana matanhatu nits ekupenya, tekinoroji. retina 5K, anti-reflective simba uye sechisarudzo inogona kurongeka ne-anti-reflective glass nanotexture.
Iine chisarudzo che Pixels mazana matatu padiki, 3P ruvara rwemhando, uye zvakare inosanganisa A13 Bionic processor. Kamera yayo ndeye 12 MP ine ultra wide angle, ine kugona kugadzira pakati furemu.
Iyo Display studio ndeye yepamusoro-inoshanda yekutarisa, yakanakira yekubatanidza kuMac Studio.
Kana iri ruzha, kwidza studio mhando maikorofoni. Seti yemagudzanzwi inogadzirwa ne mawoofer mana uye ma tweeter maviri, ine multi-channel spatial yakatenderedza ruzha. Inotsigira mimhanzi uye Dolby Atmos odhiyo.
Uye kana tikataura nezve yekubatanidza, kumusana kwayo ine matatu USB-C ports uye imwe thunderbolt. Iyo ine mukana wekuchaja MacBooks kuburikidza nechidzitiro nekupa madoko simba re96V. Iwe zvakare unokwanisa kubatanidza kusvika ku3 Studio Displays neMacBook.
Mutengo icho chikamu che 1.779 Euros zvichienda mberi. Kuchengetera kwako kwave kuwanikwa, kuunza kubva munaKurume 18.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » dzakawanda » Nyeredzi yechiitiko cheApple: iyo Mac Studio uye iyo Studio Display
Intel's Mac mini ichiri kutengeswa mushure mekutangisa Mac Studio
Apple inopa iyo itsva iPad Air ine M1 processor uye 5G